ရခိုင်ဒေသရှိ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မခံရအောင် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေ?? - Yangon Media Group
ရခိုင်ဒေသရှိ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မခံရအောင် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေ??
ရခိုင် ဒေသရှိ လူနည်းစုဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားများအကြမ်းဖက်သမားများ၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မခံရအောင် အပြည့်အဝကာကွယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်ဦးလွင်မြို့ စစ်တက္ကသိုလ် စစ်ရေးပြ ကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၉)သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ် ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကသင်တန်းဆင်းဗိုလ် လောင်းများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ယနေ့ ၂၁ ရာစုခေတ်ကြီးတွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစသည့် အချက်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့အနေ ဖြင့် စစ်ရေးတစ်ခုတည်းကိုသာ အာရုံစိုက်လေ့လာရုံသာမက အခြားကဏ္ဍများကိုလည်း ယခုကတည်းကလေ့လာဖတ်ရှုကြရန်လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ အကြားအမြင်ဗဟုသုတ၊ ပညာဥာဏ်နှင့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီး ”ပညာရဲရင့်ပွဲလယ်တင့်”ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း တွေ့ကြုံလာသည့် အခက်အခဲမှန်သမျှအား ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းမှာကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံသည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ရာကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည် ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ တော်၏လွတ်လပ်ရေးနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်တွင်တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ဘိုးဘွားများ၏ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးများစတေးပြီးမှ ရရှိထားသည့် သမိုင်းအမွေများကို တင့်တယ်စေရန်အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက်က သစ္စာလေးချက်ကိုဦးထိပ်ရွက်ပြီး တပ်မတော်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တည် ဆောက်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်း အမျိုးသားရေးအင်အားစုအဖြစ် ပါဝင်လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေး လောင်းရိပ်အောက်မှလွတ်ကင်းသည့် တပ်မတော်ဖြစ်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပြီး အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား နှင့်အမျိုးသားရေးစရိုက်လက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်၍ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဒီမိုကရေစီ နှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာလျှောက် လှမ်းရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက နယ်ခြား စောင့်ရဲစခန်းအခု ၃ဝ နှင့် တပ်ရင်းဌာနချုပ်တစ်ခုအား တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း အင်အားသုံး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်၍ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကျေးရွာများကိုဝိုင်းဝန်းခြိမ်းခြောက်အကြမ်းဖက်သတ် ဖြတ်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပေး လေ့ကျင့်မှု၊ စားနပ်ရိက္ခာစုပုံမှု၊ တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်မှုများအရ အဆိုပါအကြမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် ကြိုတင်စီ စဉ်လုပ်ဆောင်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်တွင် အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီများအား ဒေသတွင်ရှိသည့်လူအ ချို့ကအားပေးကူညီမှုပြုခဲ့သည်များကိုလည်း တွေ့ရကြောင်း၊ နိုင်ငံ တော်အနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် အကြမ်း ဖက်သမားများဟု ကြေညာထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့်ပြည်ပသတင်းဌာနအချို့သည် ဖြစ်စဉ်မှန်များကို ဖုံးကွယ်ပြီးမှန်ကန်မှုမရှိသည့်သတင်းများကို အခြေခံထားသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြမှု၊ လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာက ဖြစ်စဉ်အခြေအနေမှန်အား မသိရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့်တပ်မတော်အနေဖြင့် တရားဥပဒေနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာလုပ် ဆောင်နေသော်လည်း နိုင်ငံတကာမှ သိရှိမှုများသည် မှားယွင်းလျက် ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အ နေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများနှင့် တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း စိတ်ချမ်း မြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ထာဝစဉ်စောင့်ထိန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသရှိ လူနည်းစုဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားများလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မခံရအောင် အပြည့်အဝကာကွယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မ တော်အနေဖြင့် အပြုသဘော ဆောင်ပြီး ကောင်းမွန်သည့်လုပ် ဆောင်ချက်များကိုလည်း ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဒီမိုကရေစီရည်မှန်းချက်များအောင် မြင်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်သည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးပင်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA)သည် နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအကျဆုံးအခြေခံလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်ပင်ဖြစ် ကြောင်း၊ NCA သည် အမည်နာမအားဖြင့်သာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ဖြစ် သော်လည်း အနှစ်သာရအားဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းပါကြောင်း၊ စာချုပ်တွင်ပါဝင်သည့် အချက်များသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ ချုပ်ချယ်ထားခြင်း၊ ပိတ်ပင်ထား ခြင်း တစ်ခုမှမပါဝင်ဘဲ အခွင့်အ ရေးများကို တတ်နိုင်သမျှပေးထား ကြောင်း၊ NCA စာချုပ်တွင်ပါဝင်သည့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်ကိစ္စများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင် အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခြင်းအား ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းမှု၏ရလဒ်များ၊ အသီး အပွင့်များကို အမြန်ဆုံးရယူခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော် ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒခြောက်ရပ် သည်လည်း အတိတ်သမိုင်းကြောင်း အခြေအနေများနှင့် လက်ရှိအ ခြေအနေများကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး နှစ် ဖက်စလုံးလိုက်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည့် အခြေခံအချက်များကို ဖော်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန် ကိုအဓိကတာဝန်ယူထမ်းဆောင် နေသည့်တပ်မတော်အနေဖြင့် အမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်သည့် ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါးကို မည်သည့်အခါမှ ပွန်းပဲ့ခံမည်မဟုတ်ဘဲ အ မြဲဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် လူငယ်များ၏ စွမ်းပကားကို မြှင့်တင်ပေးရမည် ??
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆက်လက်ကူညီပေးရေး ဆွေးနွေး
တူရကီနှင့် ရုရှား S-500 ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ် ပူးတွဲထုတ်လုပ်ရန် ဆွေးနွေးနေဟုဆို
ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ပြည်သူ့အတွက် တကယ် အကျိုးရှိရဲ့လား
ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး၏ သူကောင်း ပြုခြင်းခံရသော အမ်မာသွန်မဆင်
ဟာဝိုင်အီ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ပိုမိုပြင်းထန်လာ ဒေသခံ ၂ဝဝဝ ခန့်ကို ကယ်ဆယ်ထားရ